वैशाखमा मात्र डेढ लाखभन्दा बढी संक्रमित « Yoho Khabar
असार १, २०७८ मंगलबार / Tue Jun 15, 2021
वैशाखमा मात्र डेढ लाखभन्दा बढी संक्रमित
काठमाडौँ – वैशाखमा मात्रै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट डेढ लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । वैशाख १ गतेसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या तीन लाख सात हजार ९२५ थियो । सो सङ्ख्या बढेर शुक्रबारसम्म चार लाख ३९ हजार ६५८ पुगेको छ । एक महिनाको अवधिमा मात्रै एक लाख ५८ हजार ७१ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
वैशाख महिनाभरमा चार लाख ९६ हजार नौ सय ८४ जनाको पीसीआर परिक्षण भएको छ । यस्तै बैशाख महिनामा मात्रै कोरोनाबाट एक हजार ६ सय आठ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बैशाख १ गतेसम्म कोरोनाबाट तीन हजार ६१ जनाको ज्यान गएकोमा हिजो सम्ममा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चार हजार ६ सय ६९ पुगेको छ ।
यस्तै बैशाख महिनामा ४९ हजार ४७ जना कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएका छन् । बैशाख १ गते सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार ५६ जना रहेकामा अहिले बढेर एक लाख सात हजार तीन सय ३६ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले देशभर एक हजार सात सय पाँच जना सङ्क्रमितको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
रक्सी र युवती भनेपछि सिलवाल भुतुक्कै हुन्छन् ? मनाङ्गेको ठोकुवा कति सही ?
कहिले पाउलान् आमनागरिकले खोप ?
राष्ट्रपतीको खोप अनुरोधको चिठ्ठिले काम गरेन, खोप आउने भरपर्दो श्रोत के ?
प्रदेश १ मा ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न माधव पक्षीय युवा संघको आग्रह
काठमाडौँ – दलहरुबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्णय गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्छ । तर पछिल्लो समय आयोगको भूमिका पटकपटक विवादमा
न्यायिक निकास खोज्ने जसपा उपेन्द्र पक्षको तयारी
निषेधाज्ञा बारे छलफल गर्न उपत्यकाका सीडीओहरूको बैठक बस्दै